Maydho Baby Dhigashada haya-, shaybaar, Erayada
> Resource > Talooyin > Waxa la qoro Maydho Ilmahaaga Dhigashada
Marti Roob Baby yihiin kuwo aad u muhiim ah in xisbiga qubeyska ilmaha. Martida waxaa lagu casuumay iyada oo marti ah. No marti, martida ma ... iyo xisbiga lahayn. Way fududahay inaad qaladaad samayso wax haddii aan wax walba, sida cinwaanka qaldan, muddo qaladaad, aan si fiican u daabacay, iwm Iyo Anxiety ugu horeysay waxaa laga yaabaa in erayadaasi qubeyska ilmaha martiqaadka. Taasi waa sababta ay u jiraan waa bog loogu talogalay qubeyska ilmaha fikrado lagu marti haya- sida. Sidaas, kaliya isdeji. Marti Roob Baby laga yaabaa in aan in ay adag tahay. Haddii aad tahay qof dumar ah oo xeelad, kuwaasoo ah idinka ee karaa sameeyo marti qubeyska ilmaha naftaada.
Maqaalkani waxa uu fikrado lagu marti qubeyska ilmaha haya- kula wadaagi doonaa, oo daboolaya wiil marti Roob haya-, gabar lagu marti Roob ereyo, iyo ereyo mataanaha ilmaha iyo qubeyska ilmaha laba marti.
Maydho Baby Fikradaha haya- Dhigashada
Ka hor inta marti Roob haya- ilmaha, maskaxda ku hay in macluumaadkan ka fiican tahay in ka mid ah.
1.A ilmaha cute Roob ku hadlaysaan, aayadda, ama gabay.
Macluumaad 2.General ku saabsan hooyada la sugaayo, iyo / ama magac ilmaha iyo / ama jinsiga.
3.An yeedhi of showery ilmaha.
4.Times, taariikhda, meesha showery ilmaha.
5.The ciidanka qubeyska ilmaha iyo lambarka taleefanka RSVP.
6.Provide diiwaanka ilmaha in hooyada-ka-ahaan laga yaabaa in ay wax. Ma aha lagama maarmaan u qubeyska ilmaha dhasha.
Maydho Baby Boy Dhigashada haya-
Ha soo qaadan wax casaan
buluug gataan Kaliya
Taasi ilmaha cusub wiilka
kaliya sabab biir noo Maydho Baby ah cisaynayo oo Dirk Smith ina Karen Smith Saturday, 24-kii June ee 11:00 am Clyde ee Restaurant 8332 Leesburg Pike Vienna, Virginia
Maydho Baby Girl Dhigashada haya-
Welcome to dhulka this.
The World Wide oo dhan
u sugnaaday aad Dhalashada! Kaalay oo nagu soo biira dabaal soo socda Baby Girl! Julie Smith ayaa Saturday, 24-kii June ee 11:00 am Clyde ee Restaurant 8332 Leesburg Pike Vienna, Virginia RSVP in Sarah Jones 111- 000-5555 Julie diiwaan gashan ee Baby Olimpico
Maydho Mataano Boy Dhigashada haya-
Ma aha qof, laakiin laba ilmaha ugu dhaqsaha badan soo socda
Aan caawin hooyo iyo aabe qurxin qolkooda.
Fadlan ku soo biir Maydho Twin Baby ah cisaynayo oo
Jacky iyo Berry Givens
Saturday, 24-kii June ee 11:00 am
Clyde ee Restaurant
Lammaanayaasha haya- Baby Maydho Dhigashada
Jennifer iyo Robert Smith ee
ilmaha waa jidka
In la helo iyaga diyaar
u ah maalin weyn!
Waad lagu casuumay inuu Baby ah qabayso!
Vienna, Virginia RSVP in Sarah Thomas 111-000-5555
Maydho Christmas Baby Dhigashada haya-
Cocktails, dharabtiyo iyo Holiday Kalsoonaada
Soon Tony Simperson halkaan joogi doonaa!
biir noo ah Maydho Holiday Baby
Vienna, Virginia marti by jacayl, Jane Jones RSVP 111- 000-5555 Julie diiwaan gashan ee PLACE
Marka si ay u soo diri ilmaha lagu marti Roob
Waa lagama maarmaan in la soo diro ilmaha lagu marti Roob 4-5 todobaad ka hor. Sidaa darteed, martida yeelan doonaan waqti ku filan si ay u iibsato hadiyad qubeyska ilmaha, iyo waxaa sidoo kale kharash qaar ka mid ah markii ay u soo diri marti qubeyska ilmaha inaad martida, gaar ahaan kuwa ku nool fog magaalada. Waxa kale oo mar baado ah ilaa raaco martida isticmaalaya email haddii aad ku heli karaan email laguu soo diray.
Haddii aad rabto in aad a video martiqaad qubeyska ilmaha, isku day inaad ka gaare slideshow xoog badan - DVD Muqaal dhise .
Sida loo sameeyo a Martiqaad Card shakhsiga Bachelorette xisbiga Si fudud
New Year Song Talooyinka iyo Muqaal